Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya: 3-bilood ayaan hubka kaga nadiifineynaa magaalada Muqdisho | SAHAN ONLINE
Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya: 3-bilood ayaan hubka kaga nadiifineynaa magaalada Muqdisho
MUQDISHO – Wasiirka Amniga gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow(Ducaale) ayaa ka hadlay howlgalada xasilinta magaalada Muqdisho,wuxuuna cadeeyey in go’aanka ay Xukuumadu soo saartay cidii ka hortimaada ay tallaabo sharci ah ka qaadayaan.
Maxamed Abuukar Islow(Ducaale) oo xalay shir jaraa’id ku qabtay Madaxtooyada ayaa sheegay in ay ku guda jiraan sidii loo fulin lahaa go’aanka kasoo baxay Xukuumadda.
Qori iyo hub waxba ma soo kordhinayo, magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe waa lagu nool yahay hubna laguma wato, anaga waxaa rabaa in saddexda bil ee socota inaan magaalada Muqdisho ka dhigno hub la’aan”ayuu yiri Wasiirka
Wuxuu sheegay inaan la ogolaan doonin gaari tikniko ah oo aan waraqad fasax ah wad,sidoo kale askari hubeysan iyo mid qaba dhar ciidan aan lagu arki karin magaalada.
Qofka askariga ama Milateri ha ahaado, Boolis iyo Nabadsugid hala soo xiriiro taliyihiisa warqad cadeyn haka keensado, hadii la arko askari kaligiis iska socda hubka waa lagala wareegayaa, isagana xabsi ayaa la dhigayaa waa go’aan guud illaa Madaxweynaha ka soo baxay”ayuu yiri Wasiirka Amniga Gudaha.
Wasiirka ayaa sheegay in ay rajeynayaan in sanad gudihiis magaalada qofna lagu dilin ,qaraxna ka dhicin isla markaana ay sameyn doonaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa ugu dambeyn sheegay in ammaanka magaalada Muqdisho uu soo hagaagay muddooyinkii dambe isla markaana ciidamada ay u taagan yihiin iney ilaaliyaan shacabkooda.